बैंकिङ सुविधा सुचारु गर्न एउटा बैंकलाई एउटा पास – News Dainik
News desk ११ चैत्र २०७६, मंगलवार ०९:३३ बैंकिङ्ग प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । विद्युतीय कारोबार सुचारु राख्न एउटा बैंकलाई एउटामात्र पास दिइने भएको छ। सरकारले सात दिनसम्म विहान ६ वजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म लकडाउन गरेको हुँदा बैंकका सम्पूर्ण काउन्टर बन्द हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
नेपाल बैंकर एसोसिएसनको समन्वयमा कुन बैंकका कुन कर्मचारीलाई पास दिइने भन्ने भएकाले जम्मा एउटा दिइएको भट्टले जानकारी दिए। आइतबार एसोसिएसनले विद्युतीय कारोबार निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आकस्मिक रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हुँदा बैंकहरुले आन्तरिक रुपमा तयारी गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ सुविधा के–कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको राणाले जानकारी दिए।
अघिल्लॊ चितवनमा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु
पछिल्लॊ ‘लकडाउन’ के हो ? ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ?
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले अनलाइनबाट अनलाईन खाता खोलि पहिलो मोबाइल बैंकिङ्ग …